Kaalmo shaydaan (Sheeko gaaban). | Maankaab.com
Kaalmo shaydaan (Sheeko gaaban).
Warbaahiye ayaa waxa ka soconayay barnamij faqriga ku saabsan oo dadwaynuhu si toos ah uga qayb gelayeen. Haweenay ayaa markan soo wacday, dhalalam-dhalalalam. ‘helo, magacaaga, halka aad ka soo hadlayso iyo aragtidaada oo kooban na la wadaag , fadlan” ayuu weriyihii waydiiyay.
Haweenaydu fikrad inay cid la wadaagto umay soo wicine, fursad ay dadawaynaha ugu waayasheegato ayay raadinayasay. carruur ku agoomawday iyo saboolnimo six un ugu rafatay ayay cabbaar ka warrantay, intaa ka dibna gargaar ayay dhegaystayaasha iyo madaxda warbahiyahaba ka dablatay. Weriyihii ayaa ugu laabqaboojiyay in dadka ay baaqa u dirsanaysaa wada maqlayaan, dhakhsano ay ugu soo jawaabi doonaan.
Nin mulxid ah (Rabbi kood ah) oo dhegaystayaasha ka mid ah ayaa damcay inuu miskiinaddaa waayuhu ku jiifo taakuleeyo. taakulayntaa uu fidinaayo se ujeeddo kale ayaa ugu lammansanayd. Gabadha inuu waswaas iyo tashuush dhanka caqiidada ah ku rido ayuu rabay. Xaruntii warbaahinta ayuu la xidhiidhay oo waydiiyay “Miskiinaddii cabanaysay cinwaankeeda ma isiinkartaan fadlan?, in aan caawiyo ayaan doonayaaye.
Ma’ daba ka daa, inta ay yidhaahdeen ayay judhiiba ku taabteen, una sheegeen in ay ku faraxasanyihiin kaalmadaa shakhsiyeed ee uu u fidinayo hooyadaa silicsan.
Mulxidkii waxa uu u yeedhay gabadh xoghaye u hayd, wuxuuna faray inay cunto iyo cabbitaanno fara badan soo gaddo oo miskiinadda cinwaankan leh u gayso. farriin na wuu sii faray xoghayaddiisa. Waxana uu ku yidhi ‘ marka ay ku wayddiiso cidda gargaarkan u soo fidisay, waxaad ku dhehdaa -waa kaalmo shaydaan kaaga timid!’
Inantii oo afartii eray iyo alaabtii ay soo gadday sidda ayaa u ambabaxayday gurigii miskiinadda, albaabkana ku garaacday. Gow… gaw… gaw, nabdaado dabadeedna, alaabtii ay sidday ayay gaadhigii ka soo daabbushay oo gurigii hor toomisay. Haweenaydii miskiinadda ahayd oo rayrayn owgeed kal badatay ayaa iyaduna alaabtii gurigii ku daabbushay oo in ba maqsin ku rasaysatay. Inantii oo in dooraba sugaysay in lawaydiiyo su’aashii warcelinteeda loo soo laqimay ayaa cidiba juuq u odhanwayday! Weli way yaabanayd markii haweenaydiina alaabtii iyo kala meelaynteeda ay iskaga ku mashquulsanayd ee dhankeedaba soo dhugan wayday.
Inanatii oo fajacsan ayaa miskiinaddii faraxasanyd ku soo dhowaatay oo ku tidhi “hooyo, miyaanad rabin inaad ogaato cidda gargaar kan kuu soo dirtay?”
“Hooyo cidda ii soo dirtay maxaan uga baahnahay ogaansheheeda. wixii Alle kuu qoray saw isagu cidduu doono kuu guma soo dhiibi karo? Kolka uu wax kula maago (Illahay), hadduu doono shaydaanka ayuuba budh kuu gu dhufan karaa (kuu sakhiri karaa), markaa kollay cid uu ii sakhiray ayaa ii soo dhiibtaye, su’aaliddeeddu maxay macno samaynaysaa?
Waxa laga yaabaa miskiinaddu inay maskaxda ku haysay odhaahda ingiriiseed ee tidhaahda ‘Never look a gift horse in the mouth’ oo macne ahaan noqonaysa ‘deeqaha lagu siiyo su’aalo ha daba dhigin’, lakinse miskiinaddu waxa aanay ogayn in shayddaankan ay carrabawday laftiisa loo soo sakhiray oo uu gargaarkan u soo fidiyay!
Xoghayaddii oo ka xanaaqasan farriintana lagu cabbudhiyay ayaa iska dhaqaaqday oo gaadhigeedii dib u gashay.
F.G. Shekada shebeked afcarabi ah ayaan ka soo turjumay, erey erayna uma soo afcelin e, duluc ahaan ayaan soo turjumay.